2 Stories For Rent (ID-26) အား သင်္ဃန်းကျွန်း တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
2 Stories For Rent (ID-26)
2 Stories for rent in Thingangyun Township. Near Wai Za Yan Tar Road. Living-area 1200 sqft, has Living-room, Two Master Bed-rooms, One Single Bed-room and Bath-room. Can use as office and show-room.
Asking Price - 17 Lks (Nego)
သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ဝေဇယန္တာလမ်းအနီးရှိ ငှားရန်နှစ်ထပ်အိမ်ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ခန်းအကျယ် - ၁၂၀၀ စတုရန်းပေရှိပါသည်။ ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် နှစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် တစ်ခန်းနှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ရုံးခန်း သို့မဟုတ် ဆိုင်ခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လစဉ်ငှားရမ်းခ ဈေးနှုန်း - ၁၇သိန်း (ညှိနှိုင်း)
အမည်:2Stories For Rent (ID-26)